कोरोनाबाट बच्न, शरिरमा अक्सिजनको मात्रा ठिक राख्न र फोक्सो बलियो बनाउन खानुहोस् यस्ता चिज ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / कोरोनाबाट बच्न, शरिरमा अक्सिजनको मात्रा ठिक राख्न र फोक्सो बलियो बनाउन खानुहोस् यस्ता चिज ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
कोरोनाबाट बच्न, शरिरमा अक्सिजनको मात्रा ठिक राख्न र फोक्सो बलियो बनाउन खानुहोस् यस्ता चिज ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
admin2weeks ago स्वास्थ्य Leaveacomment 68 Views
काठमाडौ : पूरै देश महामा’रीमा परेको छ । हरेक नागरिक कोरो’नावाट जोगीने अनेक उपाय अपनाइरहेका छन् । व्यक्तिले सबै नियमहरू पालना गर्न थालेको छ, शारीरिक दूरी बनाउने देखि मास्क लगाएर को’रोनावाट बच्ने उपाय गरिरहेका छन् ।
सबैलाई कोरो’नाबाट टाढा रहन यति मात्र प¥र्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी आफैं र आफ्नो शरीरलाई यति धेरै तयार गरौं कि कोरोना भए पनि, यो हल्का हुन सक्छ र हामी यसलाई सजीलै पार गर्न सक्छौं। यसको लागि, सबैभन्दा पहिले, हामीले हाम्रो फोक्सोको स्वास्थ्यलाई बलियो राख्नु पर्छ।
फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्दछ भने शरीरमा अक्सि’जनको स्तर पनि सजिलैसँग पुग्छ । यस्तो अवस्थामा फो’क्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।को’रोनाले फो’क्सोमा सिधा ह म ला गर्दछ, त्यसपछि सास फेर्ने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, हामीले पहिले नै फो’क्सोलाई बलियो बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए फो’क्सोलाई बलियो राख्नको लागि खानामा के चीजहरू समावेश गर्न सक्दछौं जानौं।
तुलसी : तुलसी पातमा अधिक मात्रामा पोटेशि’यम, फलाम, क्लो’रोफिल म्याग्ने’शियम, क्या’रोटीन र भिटामिन सी हुन्छ जसले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। बिहान ४, ५ तुलसीका पातहरू चपाउनुहोस् । यस बाहेक, तपाईं आयुर्वे’दिक काँडा बनाएर पनि पिउन सक्नुहुन्छ ।
निवारो : धेरै चमत्का’री तत्वहरू मध्य निवारो एक हो । यसमा भिटामिन ए, भिटामिन(सी, भिटामिन(के, पोटासियम, म्याग्नेशियम, कपर र आइरन जस्ता आवश्यक पोषकहरू हुन्छन्। यसको सेवनले फोक्सो बलियो हुन्छ र मु’टु पनि स्वस्थ रहन्छ।
लसुन : लसुन एन्टिबा’योटिक, एन्टि’फंगल, एन्टि’भाइरल गुणहरूको साथसाथ क्याल्सियम, फास्फोरस, फलाम, भिटामिन जस्ता तत्त्वहरूले समृद्ध हुन्छ जुन फोक्सोलाई बलियो राख्न लाभदायक छ। बिहान, खाली पेटमा पानीको साथ २ देखि ३ लसुनको पाटी खाने गर्दा पनि लाभ मिल्छ । यसलाई रातमा पानीमा भिजाएर विहान खाली पेटमा खाँदा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
बेसार : बेसारमा (ऑक्सीडन्ट र एन्टी(इन्फ्लेमेटरी गुणहरू हुन्छन् । जसले तपाईंलाई कुनै पनि प्रकारको सं क्र म णबाट बचाउँछ। यस्तो अवस्थामा सु त्नु अघि तातो दुधमा वेसार राखेर सेवन गर्नुहोस्। गुर्जो, दालचीनी, लसुन, अदुवा र तुलसीलाई वेसार मिसाएर काँडा बनाउनुहोस्। यसले तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको साथ साथै फोक्सो पनि बलियो बनाउनेछ।
Previous काठमाडौंमा अब सहज हुँदै जिवन, जेठ २० वाट निषेधाज्ञाबीच यि सेवा खुकुलो बनाइने
Next पानीको कमीले देखा पर्ने यी १० समस्या